Somali News 11.30.21
Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in beri ay dhageysato kiis keeni kara in la xadido ilmo soo rididda.
Haddii Roe v. Wade lagu rogo heer qaran, iyo Iowa xuquuqdeeda ilmo iska soo rididda ayaa sideedii sii ahaan doonta, weli aad bay ugu adkaan doontaa sharci-dejiyayaasha halkan inay xaddidaan ilmo soo rididda.
Taasi waa sababta oo ah 2018, Maxkamadda Sare ee Iowa waxay sheegtay in ilmo iska soo rididda loo ilaaliyo xuquuq aasaasi ah.
Maxkamadda Sare ee Iowa waxay leedahay garsoorayaal cusub, waxaana la filayaa inay go'aan ka gaaraan kiis ilmo soo rididda sanadka soo socda. Waxka bedelka dastuurka waxaa go'aan ka gaari kara codbixiyayaashu 3da sano ee soo socota gudahooda.
Degmada Sioux Community Community School waxay u dirtay ardayda iyo qoysaska warqad ku saabsan taxane aan habboonayn oo baraha bulshada ah oo lagu bartilmaameedsanayo ardayda iyo shaqaalaha. Degmadu waxay sheegtay in goobahaasi ay ku xad-gudbeen siyaasadda ku xeeran cagajuglaynta iyo dhibaataynta. Waxay rabaan arday kasta oo abuuray mid ka mid ah boggaga inuu ka saaro isla markiiba ama uu wajihi doono tallaabo edbin ah.
Loo-shaqeeyayaasha aagga metro ee magaalada Sioux ayaa ku daray 500 oo shaqo aan beero ahayn bishii Oktoobar iyada oo shaqaalo yari ay shaqo la'aanta ku hayso heerar taariikhi ah oo hooseeya. Heerka shaqo la'aanta ee Magaalada Sioux iyo bulshooyinka ku xeeran ayaa mar kale ahaa 2.5%, marka loo eego Horumarinta Xoog-shaqaynta Iowa.
Tirada dadka cusbitaalka la dhigay COVID-19 ee Nebraska ayaa mar kale kor u kacday usbuucii hore iyadoo gobolka uu sii waday inuu diiwaangeliyo mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee COVID-ka ee qaranka. Axadii, 528 qof ayaa isbitaal la dhigay, waana tiradii ugu badneyd tan iyo horraantii Janaayo.
NAIA (N-A-I-A) Tartanka Kubadda Laliska ee Haweenka ayaa Talaadadii ka bilaabmay Xarunta Dhacdooyinka Tyson iyadoo laga taxadarayo COVID-19. Ciyaartoyda iyo shaqaalaha 24 kooxood oo kala duwan ayaa looga baahnaa inay tijaabiyaan ka hor